परदेशबाट Archives - Safal Awaj Safal Awaj
कहाँ कुलमान ? कहाँ वामदेव ? यी दुवै आपसमा तुलना गर्न मिल्ने पात्र नै हैनन् । तर कहिलेकांही समय यस्तो भइदिन्छ कि दुवैको चर्चा एकसाथ हुन पुग्छ । वर्तमान, एउटा पात्र देशलाई नभई नहुने तर्जका रुपमा स्थापित छ । अर्काे पात्र देशलाई हुँदै नहुने त्याज्य पात्रका रुपमा चित्रित छ । तर राज्य सञ्चालकलाई नभई नहुने पात्र चाहिएको छैन । अनि हुँदै नहुने पात्र चाहिं जसरी पनि चाहिएको छ । यो लाखा र पाखाको खेल अलि रोचक छ । यहाँ राम्रो… पुरा पढौ
कठै, कृषि प्रधान देश
हामीले स्कुल पढ्दा ‘नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो’ भनेर पढेका हौं । त्यो बेलासम्म नेपाल धेरै हदसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर पनि थियो । त्यो समयमा चामल, गहुँ, मकै, दाल, तरकारी लगायत खाद्यान्न नेपालमै प्रसस्त उत्पादन हुन्थे । कतिपय उत्पादन भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान लगायत मुलुकमा निर्यात गरिन्थ्यो । नेपालको तराई क्षेत्रलाई खाद्यान्नको भण्डारका रुपमा चिनिन्थ्यो । सानै कक्षादेखि १० कक्षासम्म नेपाली, सामाजिक, पूर्वव्यवसायिक शिक्षा लगायत विषयका पाठ्यपुस्तकमा कृषिका पाठ वा सन्दर्भ हुन्थे । पूर्वव्यवसायिक शिक्षा त पुरै कृषि सम्बन्धी पाठ्यपुस्तक… पुरा पढौ
सर्वत्र राजनीति छ, शासन कतै छैन । टोल टोलमा पार्टी छ, सरकार कहीं छैन । गाउँपिच्छे नेता छन, समाजको नेतृत्व गर्ने अगुवा छैनन । घरघरै कार्यकर्ता छन्, जनता कोही छैनन ।राजनीतिले केन्द्रदेखि गाउँसम्म हरेक वर्ग, समुदाय र निकायलाई पक्ष विपक्षमा विभक्त गरेको छ । सिंगो समुदायको हितमा काम गर्ने निष्पक्षता कसैमा छैन । समग्रमा तमाम विकृतिले पुरै देश अशक्त छ । देशलाई सशक्त ढंगले चलाउन सक्ने आशालाग्दो कोही छैन । वर्षौंसम्म ऐना पुछिरहें तर मैलो मेरो अनुहारमै रहेछ भन्ने चेत… पुरा पढौ
संसारभर महामारी रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को खोप वा औषधी कहिले आउँछ सर्वत्र चासोको विषय छ । अहिले यो एउटा यस्तो विषय हो, जसको सकारात्मक खबरले पुरै विश्वमा खुसीयाली छाउनेछ। यस्तै नतिजाका लागि विश्वका कैँयन् मुलुकहरु कोरोना भाइरसविरुद्ध खोपको अनुसन्धानमा अहोरात्र खटिएका छन् । अमेरिका र बेलायतले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विकास गर्दै सफल परीक्षणको नजिक पुगेको बताएका छन्। यस्तै चीन, इरान, रुस, इटलीलगायत अन्य मुलुक पनि अहिले यस्तै खोप तथा औषधी निर्माणको अनुसन्धानमा जुटेका छन् । अनुसन्धानरत् केही मुलुक… पुरा पढौ
घर छोडेर कमाउन परदेश पुगेको ऊ धमाधम गाउँ फर्कंदैछ । ऊ दाम पाउने काम खोज्दै गाउँबाट पहिले बजार झरेको थियो । पछि अलिपरको सहर पसेको थियो । त्यसपछि परदेश पुगेको थियो ।अहिले परदेशबाट, सहरबाट र बजारबाट हुलका हुल उ जस्तै हजारौं हजार मानिस गाउँ फर्किएका छन् । यसरी फर्किनेहरुको त्यही हुलमा ऊ पनि सामेल छ । ऊ आफ्नो थाकथलो छोडेर सुखको आश, सुविधाको लोभ र अवसरको खोजीमा हिंड्नेहरुको एक प्रतिनिधि पात्र हो । विकट गाउँको गरिबीमा हातमुख जोड्नु उसको प्रमुख… पुरा पढौ
मात्र ५/७ मिनेटको दूरीमा ४ जना निकट साथी छौँ । बसोबासका हिसाबले मात्र नभई हरेक दृष्टिले वर्षौंदेखि हाम्रो निकटता छ । अमेरिकाको बोस्टनमा हामी चारै परिवारबीच आत्मीय र मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित छ । दिनै वा हप्तैपिच्छे व्यक्तिगत भेटघाट र पारिवारिक जमघट हाम्रा सामान्य नियमितता हुन् । सँगै कफी पिउन वा मःम खानको लागि जमघट गर्नुपरे हामीले क्यालेन्डर हेरेर दिन जुराउनु पर्दैन । तत्काल जमघट गर्न कुनै शनिबार वा आइतबार कुर्नु परेको छैन । नेपालमा लामो समय मूलधारको पत्रकारिता गरेका चारैजना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली… पुरा पढौ
पोखरा, १४ मंसिर । म्याग्दीमा जीप दुर्घटनामा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ५ घाइते छन् । मंगला गाउँपालिका वडा २, बाबियाचौरदेखि सल्यानतर्फ जाने…